Hanova ny anarana amin'ny OS X ho Mac OS ve i Apple? | Avy amin'ny mac aho
Hanova ny anarana amin'ny OS X ho Mac OS ve i Apple?
Miguel Angel Juncos | | Apple, Mac OS X, OS X El Capitan
Manontany tena ianao hoe maninona aho no manontany ny tenako amin'ity fotoana ity ary tonga ny antony satria mpamorona portuguese antsoina hoe Guilherme Rambo dia nahita fisie interface ao anatin'ny OS X antsoina hoe FUFlightViewController_macOS.nib ao anatin'ny FlightUtilities, izay mampiasa terminolojia macaos amin'ny anaran'ny rakitra amin'ny OS X 10.11.4.
Azo antoka fa tsy misy fifandraisana mivantana amin'ny fanovana anarana izany, na izany aza nomenclature an'ny hafa rehetra Ny rafitra Apple dia manondro hatrany ilay fitaovana andehanan'ny fanontaniana, izany hoe, rafitra toa ny iOS, TVOS na watchOS, ka ... Maninona no tsy Mac OS?
Na izany aza, ary mieritreritra fa mety amin'ny ho avy Apple dia handinika ny fanovana ny anaran'ny OS X mba hifanaraka tsara kokoa amin'ny tsipika misy ny findainy, izany hoe ny Apple TV, iPhone ary Apple Watch. Mety hisy dikany ihany koa ny fanovana azy ary hamoahana ny Mac OS 11 amin'ity taona ity, miaraka amin'ireo kinova vaovao an'ny rafitra miasa miaraka amin'ny iOS 10, watchOS 3 ary TVOS 10 izay mety ho taona mahafinaritra.
OS X dia mifototra amin'ny UNIX ary efa 15 taona no nisy, ka mety ho tonga izao ny fotoana hanombohana anarana. Tamin'ny voalohany, ny anaran'ny OS X dia nampifandraisina tamina saka be (Cougar, Guepard, Jaguar, Panther, Snow Leopard sns), ankehitriny ho an'ny kinova roa, ny ekipan'ny Apple dia niantso ireo kinova ireo amin'ny karazana karazan-kalifornia rehetra. anarana, toy ny efa nitranga tamin'i Mavericks, Yosemite na El Capitan izany.
Tsy misy antony tsy tokony hanohizan'ny Apple an'io tsipika anarana io, fa raha toa ka nataony mifanaraka amin'ny anaran'ny fitaovana ilay rafitra fiasa dia hamela zavatra izy mazava kokoa ho an'ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Hanova ny anarana amin'ny OS X ho Mac OS ve i Apple?
Raha nanova ny anarany izy, dia ny MacOs 12, 11 no dikan-teny ho avy… ..
kibatan dia hoy izy:
Inona no kely fantatry ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity momba ny tantaran'ny Apple Systems. Raha ny marina, tamin'ny taona 2012 dia nijanona tsy nantsoina hoe Mac OS X intsony ny OS an'i Apple ary OS X ihany no nomena anarana ary nifindra tamin'ny kinova 10.8 (Mountain Lion). Na dia tiako manokana aza ny miverina amin'ilay anarana voalohany. Saripika manodidina ny 10.7 sy 10.8.
Mamaly an'i kibatan
Mario A. Suarez dia hoy izy:
Inona no kely fantatry ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity momba ny tantaran'ny Apple Systems, ampahafantaro ahy fa tamin'ny 2012 no nijanona tsy nantsoina hoe OS OS intsony ny OS an'i Apple ary OS X ihany no nomena azy ary nifindra tamin'ny kinova 10.8 (Mountain Lion). Na dia tiako manokana aza ny miverina amin'ilay anarana voalohany.
Valiny tamin'i Mario A. Suárez
Marcelo Naranjo Arcos dia hoy izy:
Ny lohateny mety dia: Hanova ny anarana OSX ho Mac OS ve i Apple?
Valiny tamin'i Marcelo Naranjo Arcos
Ampiasao ny fampiharana fampahatsiahivana sao hadino ny mamaky mailaka sasany
Misokatra ny fivarotana Apple-gen ao Memphis